फ्लिकरमा आईफोन: १,15,000,००० भन्दा बढि फोटोहरू र बढ्दो | Martech Zone
फ्लिकरमा आईफोन: १,15,000,००० भन्दा बढि फोटोहरू र उदय हुँदै
शनिबार, जून १,, २०१। आइतबार, अगस्त 23, 2009 Douglas Karr
सबै आईफोन हाइपको साथ (मैले एउटा पाइन), मलाई लाग्यो कि फ्लिकरमा क्रियाकलाप हेर्न र र यसमा कतिजनाले आईफोनको बारेमा वा उनीहरूको आईफोनको साथ फोटो खिच्दै छन् भन्ने कुरा रोचक हुनेछ। फ्लिकरमा पोस्ट गरिएको आईफोनको १ 15,000,००० भन्दा बढि फोटोहरू देख्दा म छक्क परें!
मेरो आरएसएस पाठकहरु को लागी क्लिक गर्नुहोस् स्लाइड शो हेर्न पोष्टको माध्यमबाट:
एप्पल मार्केटिंग टीम वास्तवमै यसमा बोनसको योग्य छ!
उत्पाद व्यवस्थापन: मौन सफलता हो जुन प्राय: अव्यवस्थित हुन्छ
अमेजन एसोसिएट्स केन्द्रीय बेकार छ जति कमिशनको रूपमा खराब छ
जुलाई,, २०१ at 1::2007। बिहान
मलाई आईफोन मन पर्दैन। र यो उपलब्ध छैन, अझै (जहाँ म बस्दछु - कम्तिमा 6-- 9- महिनाका लागि) ...
मलाई लाग्छ कि एप्पल उनीहरूको मार्केटिंगको साथ मानिसहरूलाई छेउछाउमा उत्कृष्ट छ। जहाँ धेरै कम्पनीहरूले उत्पादकत्वमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् र लगानीमा फर्काउँदछन्, एप्पलले 'शान्त' मा केन्द्रित छन्। तिनीहरू 'चाहिन्छ' बनाम 'आवश्यकताहरू' मा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्, सामान्य विपरित।
त्योले भन्यो, एप्पलसँग चीजहरू 'काम' गर्ने पहिलो पटक र उनीहरूको उत्पादनहरूमा ड्राइभ इनभ्वाइसको धेरै लामो इतिहास छ। I एप्पल मिसिन मा poked मजा धेरै अलि।
पछाडि फर्केर हेर्दा, ... मसँग अब एक एप्पलटीभी छ (जुन म नियमित टिभीको रूपमा हेर्छु), म्याकबुक प्रो, र एक जी ((सहयोग चाहिन्छ) र एक जीa(पनि मद्दत चाहिन्छ)। दुई वर्ष अगाडि, मसँग केहि पनि एप्पलको स्वामित्व थिएन!
म कुनै पनि समय चाँडै आईफोन प्राप्त गर्ने योजनामा ​​छैन। यो केवल एक लग्जरी हो जुन म अहिले गर्न सक्दिन। अब ... यदि मेरो नियोक्ताले त्यो परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने ...। 🙂
र अनौंठो कुरा (जुन अझै कम्प्यूटरको साथ धेरै वर्ष पछि मलाई पछ्याउँछ) यो हो कि आईफोनसँग जी than भन्दा बढि प्रशोधन शक्ति छ। (जसको बारेमा कुरा गर्दै, दुई वर्ष अघि तपाइँ कसरी G3 मा तपाइँको हात प्राप्त गर्नुभयो?)
मँ चिप चाहान्छु कि एप्पल "कूल" भन्दा बढि छ। हो, तिनीहरू राम्रो गियर बनाउँछन्, तर मेरो लागि मूल "यो कार्य गर्दछ"। तिनीहरू पीसीहरू जत्तिकै अनुकूल छैनन्, तर बदलेमा तपाईले केहि प्राप्त गर्नुभयो जुन बक्स बाहिर काम गर्दछ। तपाईंले धेरै प्यारामिटरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाईं ट्वीक गर्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ एकले यसो भन्न सक्दछ: माइक्रोसफ्टले प्रयोगकर्तालाई धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्नमा विश्वास गर्दछ। एप्पलले विश्वास गर्दछ कि अधिकतर प्रयोगकर्ताहरूलाई कम्प्युटरको भित्री जीवनको बारेमा कम नै थाहा छ, र यसैले एप्पल इञ्जिनियरहरूले तपाइँको लागि छनौट गर्दछन्।
केहि कामका लागि म्याक उत्तम हुन्छ, अरूका लागि यो पीसी हो। भाग्यवस, रेखाहरू ढिला भन्दा बढी धमिलो भएका छन्।
दुबै एक KIA र एक मर्सिडीजले तपाईंलाई A देखि बी प्राप्त गर्दछ। यो अन्य एकमा अलि बढी आरामदायक छ…
जुलाई,, २०१ at 2::2007। बिहान
राम्रो छ! (मैले भर्खर G3 र G4 पाएँ - यो लामो कथा हो, तर दुबैलाई आकारमा फर्कनको लागि धेरै काम चाहिन्छ ... र मलाई केहि मनिटरहरू, कीबोर्डहरू आदि चाहिन्छ। मसँग उनीहरूसँग जानको लागि मात्र समय थिएन)। )
हो, एप्पलले चीजहरूलाई "शान्त" बनाउँदछ उदाहरणको लागि आईबीएम / लेनोभो थिंकप्याडको लागि, जुन केवल "काम" हुन्छ, र "काम" "शान्त" भन्दा धेरै फरक छ 🙂
? जुन तपाईको कामको लाइनमा फेरि निर्भर गर्दछ
(मेरो लागी एप्पलको अभियानमा ठ्याक्कै त्यस्तै देखियो ...)
मसँग केही समय अगाडि एउटा थिंकप्याड थियो र यो अति उत्तम थियो। यो ईंट थियो, तर मसँग Ope अपरेटिंग सिस्टमहरू थिए (विन्डोज २०००, विन 3,, र ओएस / २)। मनपर्ने सम्झनाहरु। मसँग अहिले म्याकबुक प्रो छ र मसँग अहिलेको सब भन्दा राम्रो ल्यापटप छ - यद्यपि केही दिनको लागि पसलमा राख्न मलाई निरुत्साहित गरियो। (एप्पलले यसलाई धेरै छिटो पल्ट्यो - म प्रभावित भएँ)।
ओहो! त्यो हेक तस्बिरहरूको धेरै O_O हो